I-COVID-19 ayizukukhansela ixesha leholide kulo nyaka
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » I-COVID-19 ayizukukhansela ixesha leholide kulo nyaka
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeMpilo • iindaba • Xanduva • Tourism • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ngokophando olutsha, umntu om-1 kwaba-4 eMntla Melika akacwangcisi ukubamba itheko kulo nyaka; Nangona kunjalo, isicwangciso soku-1 kwaba-5 sokuya kwiminyhadala yabantu ababini kule holide yeholide (kubandakanya nemibhiyozo yoNyaka oMtsha).
Izicwangciso zimisiwe kwimibhiyozo yenkolo okanye yehlabathi
The Covid-19 Ubhubhane ubenefuthe elibi kwizicwangciso zokuzimasa imibhiyozo yoluntu okanye yenkolo nge-47% kuphela esacwangcisela ukuya kulo nyaka, xa kuthelekiswa nama-66% kunyaka ophelileyo.
I-35% icwangcisa ukuya kwi-1 ukuya kwe-2 kwimibhiyozo yeholide yomntu kulo nyaka (kubandakanya uEva woNyaka oMtsha);
Isicwangciso se-33% sokuzimasa iminyhadala engama-3 +;
I-20% ayinazicwangciso zokuya kwimibhiyozo yomntu.
Uhlala njani ukhuselekile ngeli xesha leeholide
Ngokutsho kweCDC, imibhiyozo yeholide yokuphela konyaka "yimisebenzi enobungozi obukhulu." Ukunceda, nazi iingcebiso ezi-4 ezinokugcina wonke umntu ekhuselekile ngeli xesha leholide:
Ingcebiso # 1: Nxiba imaski
Uphando olwenziwe yiYunivesithi yaseCalifornia lubonisa ukuba amakhulu amachaphaza amancinci asasazeka emoyeni xa umntu ethetha ibinzana elilula. Nxiba ilaphu elimanzi lokuthambisa njengomqobo emlonyeni kwaye phantse onke amathontsi ayavalwa.
Ngokophando i-34% yemikhosi iya kucela iindwendwe ukuba zinxibe imaski.
Ingcebiso # 2: Khuhla njengogqirha
Kuyavela ukuba sinokunciphisa ukusasazeka kwezifo zokuphefumla ngaphezulu kwama-20% ukuba sonke sihlamba izandla rhoqo. Ukuhlamba izandla kakuhle kuthetha ukusebenzisa isepha kunye nokuhlamba imizuzwana engama-30 ubuncinci kubandakanya phakathi kweminwe kunye nesiqingatha sokunyuka kwengalo.
Ngokweziphumo zophando, i-38% yemikhosi icwangcisela ukubonelela nge-sanitizer (okanye iiglavu) kubo bonke abazimase.
Ingcebiso # 3: Khulisa indawo
Elinye icebo elilungileyo kukuseta imibhiyozo yeholide ukwandisa indawo kunye nokunciphisa unxibelelwano. Njengokuba:
Isicwangciso se-27% sokumisela indawo yokutyela kwigumbi elikhulu, njengegumbi lokuphinda ubuye, ukulungiselela iindwendwe indawo ethe chatha;
Isicwangciso se-17% sokutya okumangalisayo;
Isicwangciso se-18% sokumisa isithuba esingaphandle shushu apho abantu banokuhlanganisana khona;
I-9% ikhethe ukugqiba ukulungiswa okuncinci kumakhaya abo ukuze yenze indawo enkulu yokuhlanganisana.
khumbula: Izikhokelo ze-CDC zincomela ukuhlala ubuncinci iinyawo ezintandathu ngaphandle kwabanye abantu.
Ingcebiso # 4: Yamkela itekhnoloji
Ngelixa kukho amanyathelo okhuseleko onokuwathatha ekhayeni lakho, eyona ndlela ikhuselekileyo yokubhiyozela iiholide kulo nyaka ikude. Cwangcisa iingxoxo zevidiyo rhoqo kunye nezihlobo ezingekhoyo kunye nabahlobo.
Yenza uninzi lweefowuni zakho zevidiyo ngokukhetha amaqonga okubiza ividiyo onke amalungu osapho akhululekile kwaye aqhelene nayo, njengeFaceTime yabasebenzisi beApple, iDuo yabasebenzisi be-Android, okanye uhambe nemveliso yendalo yonke njengeZoom.
Khumbula ukonwaba kunye. Ukuba uthumela izipho kwangaphambili ungalungiselela ukuzivula ngqo kwikhamera kwaye ninokudlala kunye kwi-intanethi.
Ukhuseleko lwabantu esibathandayo, ewe, yeyona nto iphambili kuwo wonke umntu ngeli xesha leeholide. Ngezinto ezimbalwa zokukhusela ze-COVID-19, wena kunye nosapho lwakho ningeva nge-2020, ngokukhuselekileyo.
Idatha yaqokelelwa kwi-Intanethi ngeSaveveyMonkey phakathi kukaDisemba 2 ukuya ku-3, 2020.
Abaphenduli abayi-1,021 baphendule imibuzo eyi-7 yokuzibika ngokunxulumene nezicwangciso zexesha leholide ka-2020.
Umda oqikelelweyo wempazamo +/- 3.00 yeepesenti, amaxesha angama-19 kwayi-20.